Ergadii dooran lahayd Xubnihii Aqalka Sare Ku matali lahaa Gobolada Waqooyi oo la xareynayo. | Baydhabo Online
Ergadii dooran lahayd Xubnihii Aqalka Sare Ku matali lahaa Gobolada Waqooyi oo la xareynayo.
Waxaa maanta lagu wadaa in lagu xareeyo gudaha magaalada Muqdisho ergadii dooran lahayd xubnihii aqalka sare ku matali lahaa Gobolada Waqoyi ee Dalka.Gudiga dooranshooyinka Dadban ee Soomaaliya ayaa shaaca Ka qaaday in ay maanta iyo berri ay xareyn doonaan ergadii dooran lahayd xubnaha Aqalka Sare ee Gobolada Waqooyi ee dalka ayagoo xusay in maalinta Sabtida ah la dooran doono ilaa 6 xubnood oo ka mid noqon doono Xildhibaanda Aqalka Sare ee Soomaaliya.
Doorashada ka socoto dalka ayaa mareysa heer gabo gabo ah ayadoo la doortay dhamaan xubnihii aqalka Sare ku matali lahaa Dhamaan maamul goboleedyada dalka waxaana ka harsan oo kaliya gobolada waqooyi ee dalka oo ayagana maalinta sabtiga ah bilaaban doono.
Sidoo kale waxaa maamul Goboleedyada Dalka kasoo Gabagabobay doorashada xubnaha aqalka Hoose ku matali lahaa dhamaan maamul goboleedyada dalka marka laga reebo Gobolada waqooyi oo wax yar ka harsan yihiin.